Iibsashada Guri Sannadka 2022: Talaabo Tallaabo Hagaha
Bogga ugu weyn Iibsashada Guri Sannadka 2022: Talaabo Tallaabo Hagaha
Iibsashada guri waa mid ka mid ah go'aamada ugu waaweyn ee aad qaadan doonto. Oo waxay noqon kartaa dareen-duubis si loo ogaado dhammaan tallaabooyinka.
Waxaa laga yaabaa inaadan ogeyn waxa la sameeyo marka hore, sida loo helo kormeere guri, ama inta aad ku bixin lahayd gurigaaga riyada. Haddaba xaggee ka bilowdaa?
Waxaad rabtaa inaad hubiso inaad wax walba si sax ah u samaynayso maxaa yeelay hannaanka iibsashada guri waa mid adag oo waqti badan qaadanaya.
Laga soo bilaabo fahamka ikhtiyaaradaada deyn -guri si aad u fahamto lacag -bixinnada hoos -u -dhigga si aad u dejiso hab -socod wax -ku -ool ah oo wax -ku -ool ah.
Baadhid: Sida Loo Iibsado Guri Aan Lacag Lahayn 2021: 7 Siyaabood Oo Sharci Ah
Sidee Billowga Guri u Iibsan Karaa?
Dadka badankiisu waxay leeyihiin haddii aad jeceshahay guri oo aad dalab u soo jeedinayso, waa inaad heshaa.
Waa kuwan tallaabooyinka aad u baahan tahay inaad raacdo si aad guri u iibsato. Ka bilow inaad la xiriirto Mulkiilahaaga ama eegto liisaska aaggaaga.
Waxaa laga yaabaa inaad taqaano qaar ka mid ah dadka u shaqeeya Mulkiilahaaga. Ama waxaad weydiisan kartaa saaxiibadaa iyo qoyskaaga caawimaad. Laakiin lahaanshaha Mulkiilaha ayaa lagama maarmaan u ah bixinta dalab aad u fiican.
Wakiilo badan ayaa mushahar qaata oo kaliya haddii macaamiishooda ay helaan guryaha ay liis gareynayaan. Waa inay hubiyaan in dalabku yahay caddaalad.
Waa maxay dalab macquul ah?
Gurigaaga xiga, waxaa laga yaabaa inaad haysato dhawr doorasho. Waxaad iibsan kartaa guri ama guri. Waxaad ku bixin kartaa lacag caddaan ah, ama waxaad hoos u dhigi kartaa boqolley ka badan qiimaha guriga.
Akhri Sidoo kale: 10 Guri Ee Ugu Qaalisan Aduunka Sanadka 2021
Intee in le'eg ayaad u baahan tahay inaad kasbato ka hor intaadan gadan Guri?
Fahamka ikhtiyaarrada amaahda guryaha Waxaa jira laba nooc oo waaweyn oo deyn -guri: qiime go'an iyo sicir -beddel.
Amaahda raasumaalka go'an waxay leedahay dulsaar go'an, taas oo macnaheedu yahay in lacag-bixintaadu is-beddeli doonin iyadoon loo eegin dulsaarka.
Si kastaba ha ahaatee, amaah guri oo leh qiime kala duwan, waxaad yeelan doontaa ikhtiyaarka aad ku beddeli karto amaahdaada wakhti kasta.
Dillaal amaah-guri ayaa kaa caawin kara go'aaminta habka ugu qiimaha badan ee aad ku iibsan karto guri una sharxi kartid ikhtiyaaradaada midkood go'an ama mid kala duwan. (Xusuusnow: Dillaaliinta guryaha oo dhan ma bixiyaan talo guri oo lacag la'aan ah).
Dejinta hanaan wax -ku -ool ah oo wax -ku -ool ah Dejinta hoygu waa qayb ka mid ah hannaanka iibsiga guriga oo kaa caawinaya inaad ogaato inaad iibsanayso guriga saxda ah iyo in kale.
Xirfadle heer fiican leh ayaa kaa caawin kara habkan iyo in ka badan.
Hubi Sidoo Kale: Sida Looga Guuro Guriga Waalidkaaga 2021 | Tallaabooyin Wax -ku -ool ah oo Fudud
Waa Maxay Dhibcaha Deynta Ah ee Aan U Baahanahay Inaan Iibsado Guri 2021?
Uma baahnid dhibco kaamil ah si laguugu oggolaado amaah guri. Dhab ahaantii, waxaa ka sii muhiimsan inaad dhaqaale ahaan ku xasilloon tahay dakhligaaga intii aad lahaan lahayd sumcad fiican.
Iyadoo taas la leeyahay, waxaa jira shuruudo dhibco deyn oo gaar ah oo ay tahay inaad ka digtoonaato markaad dalbanayso amaah guri.
Kuwa soo socda ayaa sharraxaya qodobbada ay amaahiyayaashu isticmaalaan si ay u qiimeeyaan codsadayaasha. Amaahiyayaashu waxay u baahan yihiin dhibco dhibco oo wanaagsan si ay ugu qalmaan amaah guri, waxaad u baahan doontaa inaad muujiso inaad haysato dhibco deyn oo gaar ah.
Waxaan xisaabin karnaa dhibcahan ku saleysan taariikhdaada deynta, taariikhda lacag -bixinta, iyo culeyska deynta.
Haddii aad deyn ka codsaneyso bangiga, deyn -bixiyuhu wuxuu caadi ahaan eegi doonaa dhibcahaaga FICO. Dhibcaha FICO waa dhibcaha “heerka warshadaha” oo inta badan amaahiyayaashu isticmaalaan.
Akhri Sidoo kale: Intee in le'eg ayaad siisaa Guri -hayaha 2021 -ka? Waxyaabaha Abaalmarinta Maalinlaha ah
Ma iibsan kartaa Guri leh Dhibco Dhibco oo ah 500?
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah inaad isticmaasho hubiyaha dhibcaha dhibcaha si aad u aragto sida wanaagsan ee aad u sameyneyso warbixintaada deynta.
Waxaa muhiim ah inaad biilashaada ku bixiso waqtigii loogu talagalay, mar walbana isku day inaad ka dhigto dheelitirka kaarka deynta wax ka yar 35% xadkaaga deynta.
Ka dib markaad isticmaasho hubiyaha dhibcaha dhibcaha, waa inaad la fariisataa koobiga warbixintaada deynta. Waxaad ka heli kartaa hal koobi oo lacag la'aan ah warbixintaada deynta sanad walba saddexda xafiis ee deynta.
Marka la soo koobo, waa inaad aragtaa akoonnada kaarka deynta ee furan, khadadka amaahda cusub, iyo deynta iyo dheelitirka deynta ee hadda.
Qodobka ugu muhiimsan ee fiiro gaar ah la siinayo ayaa ah saamiga adeegsiga amaahdaada. Marka saamiga adeegsiga amaahdaadu uu ka sarreeyo 30% ama ka hooseeyo 30%, waxay ka dhigan tahay inaad isticmaaleyso sumcaddaada in ka badan intii aad heli lahayd.
Tallaabo Tallaabo -tallaabo ah Tusaha Sida Loo Iibsado Guri 2021
Si aad u iibsato guri ma aha nidaam aad u fudud, waxaad u baahan tahay inaad raacdo tillaabooyin si aad uga fogaato inaad ku lumiso hawsha.
Hoos waxaa ku qoran 9 tallaabo oo aad rabto inaad tixgeliso ka hor intaadan gadan guri.
Tallaabada 1: Soo hel Gurigaaga Riyada
Iibsadayaashu sida caadiga ah ma ogaan karaan guriga ay ku riyoodaan iyagoo si fudud u kaxeynaya hareeraha oo arka qof ahaan. Hadday sidaas tahay, markaa waxaad u baahan tahay inaad si dhakhso leh wax uga qabato.
Tallaabadaada ugu horreysa waa inaad hubiso qiimayaashii ugu dambeeyay ee guryaha ee aaggaaga. Kadib, waxaad sahamin kartaa waddooyin kala duwan si aad u hesho fikrad sax ah oo ku saabsan hantida.
Tusaale ahaan, waxaad ballan ka samaysan kartaa kireeyaha oo aad arki kartaa guryaha dhowaan la iibiyay. Ama waxaad adigu ballansan kartaa guri furan, halkaas oo dadka wax iibsan kara ay naftooda ku arki doonaan guriga.
Kahor intaadan bixin oo aadan bilaabin ugaadhsiga guriga, si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay inaad ogaato boqolkiiba inta aad diyaar u tahay inaad ku qaadato ugaadhsiga guriga.
Dadka qaarkood ma sugi karaan jawaab ku saabsan xaaladda guryeynta, halka kuwo kalena ay waqti qaataan.
Tallaabada 2: Tixgeli Waxa aad Qaban Karto
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee aad sameyn karto waa inaad ogaato sida miisaaniyaddaadu u eg tahay. In kasta oo aysan jirin laba iibsade oo isku mid ah, waxaan kaa caawin karnaa inaad go'aamiso inta aad awoodid.
Si aad taas u samayso, waxaad u baahan doontaa inaad qorto dhammaan hantidaada iyo macluumaadka maaliyadeed, oo ay ku jiraan lacag caddaan ah, IRA -gaaga, 401 (k), iyo koontooyin kasta oo kale oo aad heli karto.
Waa inaad sidoo kale ogaataa inta lacag -bixinta hoose aad ku qanacsan tahay. Deyn -bixiyeyaasha badankood waxay u baahan doonaan ugu yaraan 5% qiimaha iibka in la dhigo.
Haddii aad haysato kayd, waxaa laga yaabaa inaad u qalanto 3% lacag bixin hore. Haddii kale, waxaad dooni doontaa inaad aragto haddii ay jiraan wax wada-saxiixeyaal ah oo ku jira amaahda oo kaa caawin doona samaynta farqiga.
Tallaabada 3: Dooro Deyn -hayaha Guryaha
Haddii aadan weligaa guri iibsan, waxaad u baahan doontaa inaad hesho amaahiyaha guryaha.
Habka ugu fudud ee lagu heli karo mid wanaagsan ayaa ah inaad ku bilowdo helitaanka dillaalkaaga, haddii aad la shaqeyneyso wakiilka guryaha. Raadi dillaalkaaga oo u kaxee qadada oo weydii isaga ama iyada inay ku taliyaan amaahiye.
Deyn -bixiyeyaal badan oo guryaha amaahda ah uma baahna inay hore u sameeyaan wax waraaqo ah, taasoo wax fududayn doonta. Qaar ka mid ah wakiilada guryaha ayaa sidoo kale yeelan doona dillaal amaah guri oo aad la hadli karto.
XIDHIIDHKA: Qiimayaasha Raadiyaha Sirius: Waa immisa Raadiyaha Sirius bishii?
Hel hanti ku habboon. Dad badan ayaan garanayn inaad u baahan tahay inaad hesho guri ugu yaraan saddex qol jiif ah, oo ku yaal meel aad u fiican, iyo degmo dugsi oo wanaagsan.
Tani waxay u ekaan kartaa mid fudud, laakiin maanka ku hay in inta qol jiif ee aad haysato ay sii badanayso alaabtu inaad iibsato.
Tallaabada 4: Hore u sii ansixi amaahda
Ka bilow marka hore booqashada deyn -bixiyahaaga. Booqo deyn -bixiye si aad u ururiso dhammaan waraaqaha loo baahan yahay. Deyn -bixiyuhu wuxuu ku weydiin doonaa inaad buuxisid arjiga waxaana laga yaabaa inuu ku weydiiyo inaad xoogaa lacag ah wada hesho ka hor intaan laguu oggolaan.
Dhammaan lacagta aad haysato ama keydsan ayaa lagu xisaabin doonaa inta lagu guda jiro hawsha amaahda guryaha.
Hore u sii ogow deynta guriga. Sida caadiga ah waxaad horay u sii oggolaan kartaa amaahda guriga oo leh dhowr maalmood, ama si aad dalab u samayso.
Hel kormeer guri. Kahor intaadan gorgortan gelin guri, waa inaad baaris samaysaa. Waxaad rabtaa inaad wax ka ogaato wixii dhibaatooyin ah ee dhici kara ka hor intaadan bixin dalab.
Haddii dhibcaha dhibcahaagu hooseeyo oo aad rabto inaad deyn ku qaadato lacag bixinta hoose, waxaa laga yaabaa inaad u qalanto amaah lagu hagaajiyay heerka dulsaarka hadda.
Tallaabada 5: Samee Liiska Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka
Si aad u hesho sawir cad oo ku saabsan waxa ay tahay inaad samayso, waa fikrad wanaagsan inaad waqti qaadato si aad uga hadasho riyooyinkaaga iyo welwelkaaga.
Miyaad rabtaa inaad yeelato guri magaalo, guri xaafad ku yaal ama guri beer? Qolka jiifka iyo musqusha keebaa ugu badan ee aad isticmaali doontaa?
Go'aanso tallaabooyinkaaga ugu horreeya.
Markaad doorato tallaabadaada ugu horreysa, ka fikir su'aalaha ay tahay inaad weydiiso wakiilka hantida ma guurtada ah marka ugu horreysa ee aad kala hadlayso iibsashada guri.
Waa kuwan dhowr ka mid ah su'aalaha ay tahay inaad ka fikirto: Sideen uga dhigi karnaa kulankeenna ugu horreeya mid aan dhib lahayn? Guri noocee ah ayaad ku talinaysaa inaan eegno?
Miyaad i tusi doontaa mid ka mid ah guryahaas toddobaadkan? Miyaad maskaxda ku haysaa miisaaniyad gaar ah? Sideed u soo jeedin kartaa inaan dejiyo miisaaniyad? Yaan weydiisan karaa caawinaad dheeri ah?
Tallaabada 6: Faa'iidooyinka Iibsashada Guri
Waxaa jira dhowr sababood oo lahaanshuhu u yahay dhaqaajinta maaliyadeed iyo hab -nololeed ee ugu habboon.
Aynu eegno dhowr ka mid ah sababaha lahaanshuhu u noqon karo xulasho aad u fiican:
Uma baahnid inaad kiro bixiso.
Celceliska kirada guryaha laba qol ee Ameerika waa qiyaastii $ 1,300 bishii. Taasi waa qayb aad u qurux badan oo lacag caddaan ah oo aan la gelin mustaqbalkaaga.
Amaahda guryaha ayaa kaa caawin karta samaynta sanduuq degdeg ah, waxaadna isticmaali kartaa qayb ka mid ah dakhligaaga bishii si aad u bixiso deyntaada.
Waxaad xakamayn kartaa xawaaraha qiimaynta qiimaha guriga oo xataa waxaad awoodi kartaa inaad gurigaaga haysato sanado. Marka dulsaarka dulsaarku kor u kaco, saamiga gurigaagu wuxuu heli doonaa lacag badan.
Hayso gurigaaga haddii aad ku iibsato deyn. Markaa, lahaanshaha guri wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku noolaato gurigaaga riyada ilaa iyo inta aad jeceshahay.
Tallaabada 7: Qasaaraha Iibsashada Guri
Mid ka mid ah khasaaraha ugu weyn ee iibsashada guri waa kharashka iyo waqtiga lagu heli karo. Inta badan kuwa iibsada guryaha waxay waqti badan ku bixiyaan baarista guryaha onlaynka iyo hubinta xaafadaha.
Faa'iidooyinka iibsashada guri.
Iibsashada guri waa ikhtiyaarka kaliya ee lagu gadan karo guri. Go'aankaagu wuxuu noqon karaa mid adag, laakiin waxay noqon doontaa wax lagu farxo inaad ogaato inaad leedahay meel aad adigu wacdo.
XIDHIIDHKA: Maxaa La Helaa Qof Wax Walba Leh | 20 Jawaabood ee ugu Fiican
Waxaad yeelan doontaa meel bannaan oo aad ku qurxin karto taabasho shaqsiyeed. Waxa kale oo ay ku siin doontaa hab aad ku ilaaliso xiriir noloshaada oo dhan ah waalidkaa iyo saaxiibbadaada.
Bilowgii, qoyskaaga ayaa ku taageeri doona oo kula shaqayn doona si aad u hesho deyn.
Waxaad yeelan doontaa xorriyad aad ku dejiso xeerar iyo dhinacyo kale oo gurigaaga ah waxaadna ku raaxaysan kartaa aqoonta aad samaysay go'aan sax ah.
Tallaabada 8: Samee Dalab
Marka hore, samee dalab. Tallaabadani inta badan waa xalka ugu dambeeya. Deyn -bixiyuhu ma aqbali karo dalabkaaga oo waad seegi kartaa guriga riyadaada.
Ka dib markaad dalab samayso, waxaa muhiim ah inaad ogaato waxaad awoodi kartid. Haddii aad haysato lacag caddaan ah oo aad ku iibsatay, waxaad sidan u samayn kartaa sida dadka intooda badani sameeyaan. Haddii aad leedahay caqabado, ma aha fikirka ugu fiican inaad kaligaa ku tiirsanaato lacag caddaan ah.
Isticmaal xisaabiyaha amaahda guryaha si aad u xisaabiso waxa ay noqon doonto lacagtaada billaha ah haddii aad leedahay dakhli shaqaale caadi ah.
Kadib, waxaad u baahan tahay inaad fahanto ikhtiyaarka amaahda guryaha ee sida fiican ugu shaqeeya miisaaniyaddaada. Weydiista qiimo -dhimis ama dib -u -gorgortanka dalabkaaga haddii uu aad u sarreeyo waxay noqon kartaa ikhtiyaar wanaagsan.
Tallaabada 9: La shaqee Wakiilka Guryaha ee Khubarada ah
Iibsashada guri ma aha mid u fudud sida iibsashada baabuur la isticmaalay iyo wacitaan wanaagsan. Taas micnaheedu waa, waxaad rabtaa inaad shaqaalaysiiso qof hubin doona inaad fahantay dhammaan xulashooyinkaaga iyo waxa laga filan karo mulkiile guri cusub.
Waa kuwan talooyin dhowr ah oo ka socda khubarada kaa caawin doona inaad hesho wakiil guri oo weyn:
Hore u deji filashooyinka
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu horreeya ee ay tahay inaad samaysato adigoo ah mulkiile guri waa inaad la fadhiisato wakiilkaaga guryaha oo aad hesho heshiiska wakiilka guryaha.
Qoraalkani wuxuu dejinayaa filashooyinka, sida inta aad bixinayso guri iyo inta baaritaan ee aad u baahan doonto. Hubi inaad haysato liis faahfaahsan oo su'aalo ah oo ku saabsan xaafadda, degmada dugsiga, iyo heerka dembiyada deegaanka.
Iyo, hubso in adiga iyo wakiilkaaga hantida ma guurtada ah aad ku heshiiseen waqtiga dhabta ah ee iibsashada guri.
Haddii aad iibsanayso guri markii ugu horraysay ama aad dib -u -maalgelinayso, wakiil khibrad leh ayaa kaa caawin kara inaad samayso go'aan wanaagsan.
Isku -qor Lacag -bixinta - koorsadaada shilka toddobaadlaha ah ee ku saabsan sida loogu noolaado noloshaada dhaqaale ee ugu fiican.
Intaa waxaa dheer, dhammaan su'aalahaaga lacagta gubanaya, ka fiiri deynta Mic, keydinta, xirfadda, maalgelinta iyo xarumaha daryeelka caafimaadka si aad u hesho macluumaad dheeraad ah - taasi waa mid waxtar leh.
Waa maxay dhibcaha dhibcahaaga bartilmaameedka haddii aad rabto inaad iibsato guri
Waxaad u baahan tahay inaad haysato dhibcaha dhibcaha ee 600 ama ka sareeya.
Ma ku iibsan kartaa guri 50k
Xaqiiqdii way adkaan doontaa laakiin ma suurtowdo
Waa maxay mushaharka aan u baahanahay si aan u helo guri 700k ah
Si aad u hesho guri intaas le'eg, waa inaad awooddaa inaad kasbato 250 000 oo doollar sannadkii.
Bixinta deyntaada ma ka caawineysaa kobcinta dhibcahaaga deynta?
Waxay kaa caawineysaa inaad ku kordhiso dhibcaha dhibcaha bil ama laba kadib
Mudo intee leeg ayay qaadan doontaa in la helo dhibcaha dhibcaha ee 700?
Helitaanka dhibcaha dhibcaha ayaa laga yaabaa inay qaadato bilo ama xitaa sanado.
Waa maxay dhibcaha dhibcaha aad u baahan tahay si aad guri u iibsatid 2022
13-ka Sawir ee ugu Qaalisan Adduunka
Rinjiyeyaashu waa mid ka mid ah hantida qiimaha leh ee dadka qaarkiis ay ku faanaan lahaanshaha. Dadka caanka ah waxay kuwan u arkaan…
10 Meesha Ugu Fiican Ee Lagu Iibsado Muraayadaha Aan Caymis Lahayn 2022
Sida laga soo xigtay daraasad ay daabacday Golaha Aragga ee Mareykanka, waxaa lagu qiyaasaa in ku dhawaad ​​65%…
13 App -ka Iibinta Khadka tooska ah ee ugu wanaagsan ee Alaabada Hore
Gurigaaga, had iyo jeer waxaa ku yaal shay ag yaal meel aan sabab lahayn. Guri celcelis ahaan…
Baabuurtu waa mid ka mid ah gaadiidka. Markii ugu horreysay ee la dhisay 1885-kii waxaa dhisay injineer Jarmal ah Karl Benz, baabuur…
20 Fikradaha Hadiyadaha Kirismaska ​​ee waara 2022
Christmas waa mid ka mid ah waqtiyada ugu fiican ee hadiyado la siiyo kuwa aad jeceshahay, qadarin oo muujiso dareenkaaga…